Madaxweyne Qooq Qoor oo sheegay in farmaajo uu ula siman yahay musharixiinta kale. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Qooq Qoor oo sheegay in farmaajo uu ula siman yahay musharixiinta...
Madaxweyne Qooq Qoor oo sheegay in farmaajo uu ula siman yahay musharixiinta kale.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) ayaa markii ugu horaysay ka hadlay xaalada Dalka iyo sida ay musharixiinta aaminsan yihiin oo ah in uu ka jiro dhinaca Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo uu garabkiisa yahay.
Qooq Qoor oo waraysi siiyay markii ugu horaysay Tv-ga Soomaali Cable ayaa sheegay in farmaajo uu ula siman yahay musharixiinta kale, waxa uuna faah faahin kooban ka bixiyay sida shirkii Afisyoone, cabsida laga qabo in la sameeyo muddo kororsi horleh.
Wareysigan oo hordhiciisa lasii daayey ayaa Qoor Qoor waxa uu kusoo hadal qaaday xiriirka siyaasadeed ee haatan kala dhexeeya madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, maadaama uu ka mid ah hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada ee taabacsan Villa Soomaaliya.
Sidoo kale Qoor Qoor ayaa shaaca ka aaday haddii uu Farmaajo si rasmi ah ugu dhowaaqo musharraxnimadiisa uu ula mid noqon doono musharraxiinta kale ee sanadkan 2021-ka u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee afarta sano ee soo socota.
Previous articleWafdi iskugu jira Dowladda Soomaaliya iyo Galmudug Goboleedka Galmudug oo gaaray Magalada Garoowe
Next articleGuddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq oo qeylo dhaan ka muujiyay in dadka deegaankaasi ay alshabaab barakicin xoogan ku hayaan
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo sheegtay in la helay 280 qof laga...
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa shaacisay baaritaanki 24-kii saac ee ugu dambeeyey la sameeyey in 280 qof laga helay fayraska karoona. Waxay wasaaradu sheegtay 280...
Wasiir Fiqi “ talaabo wanaagsan ayuu qaaday saakay Taliye Saaddaq Joon
Mahdi Guuleed oo kulan afur ah la yeeshay...
xaalada Garoonka Muqdisho oo kacsan kadib Madaafiic lagu garaacay Garoonka
Talo ku socoto Ra iisal wasaraha xilgaarsiinta Rooble
20 sano kadib duulaankii ciidamada reer galbeedka ku qadeen Afghanistaan
Jawaari “hadii Farmaajo 80-cisho sii fadhiyo Xaafiiska 4-sano ee soo socotana...